Wararka | Radio Himilo | Page 20
radio himilo June 10, 2017
Muqdisho – Dhacda buuraha Alpa una dhow kob-dalxiiseedka St. Moritz, Bergün/Bravuogn waa mid kamid ah xaafadaha buuraleyda kuwa ugu qurux badan ee qaaradda Yurub. Aad u qurux badan, oo dhabtii sawirrada laga qaaday ee lagu baahiyo baraha bulshada ay dad badan ka ...
radio himilo June 9, 2017
Muqdisho – Ey yar ayaa dhalaaliyay qalbiyada malaayiin qof oo Kuuriyaan ah kadib markii warbaahintu kusoo warantay inuu muddo saddex sano ah sugayay milkiilihiisa maqan – ogaal la’aan inuusan soo laaban doonin. Dhowr sano kahor, haweeney da’ ah oo ku ...
radio himilo June 7, 2017
Muqdisho – Dhawaqa aad maqlaysaan waa hooris Subac oo ay wada aqrinayaan cutub ka kooban labood da’yar iyo da’dhexaad ah kaas oo habeen kasta oo bisha Soon-qaad katirsan ka dhaca xaafad kamid ah degmada Wadajir ee gobalka Banadir. Waxaana cutubkaas ...
Muqdisho – Jacqueline Saburido waxay qaadaneysay fasax jaamacadeed markii ay timid Maraykanka si ay u barato Ingiriiska. Waxay ku sugneyd gobolka Texas wax ka yar bil markii burbur ku dhacay uu nolosheeda gebi ahaanba wada rogay. Darawalka cabsanaa kaas oo ...
radio himilo June 6, 2017
Muqdisho – 28 sano kahor, Carmen Jiménez oo ku nool caasimadda Madrid ee dalka Spain ayaa gebi ahaanba noqotay indhoole dhaawac indhaha kasoo gaaray awgeed. Ugu yaraan, taasi waa waxa ay u sheegtay qof walba oo ay kamid yihiin reerkeeda ...
radio himilo June 5, 2017
Muqdisho – 83 sano jir lagu magacaabo Antonio Vicente wuxuu 40-kii sano ee lasoo dhaafay uu ku howlnaa dib u tarminta keymaha deegaanka. Sida badan oo xoola-dhaqatada Brazil ay u jaraan geedaha si ay xeyn-daab uga dhigaan xerooyinka iyo inay guryo ...
Shiinaha – Markay Geeduhu helaan Qadarinta ay mudan yihiin!
Muqdisho – Ardayda dugsiga magaalada Beijing ee Yucai High School waa inay aad u digtoonaadaan marka ay ku dhex ciyaarayaan gegida kubadda cagta. Taasina waa geed 100 sano jir ah oo ku dhex-yaal bartamihiisa. Ka dhisidda garoon ciyaareed hareeraha geed weyn ...
Maynu Adeegsanno Awoodda Wax Cafinta!
radio himilo June 1, 2017
Muqdisho – Xusuusnow, uma cafisid dadka naftooda aawadeed – waxaad u cafisaa naftaada awgeed. Cafintu micnaheedu ma ahan inaad iska hilmaanto wixii ku dhacay – kamana dhigna inaad dirayso farriin ah in wixii laguugu sameeyey ay sax aheyd. Balse waa ...
radio himilo May 31, 2017